Ilaaha Runta ah Yuu Yahay?
Ilaahay Yuu Yahay?
DADKU waxay caabudaan ilaahyo badan. Laakiin Qorniinka Quduuska ah waxay ina baraan inuu Ilaah keliya oo run ah jiro. Isaga mid la mid ah ma jiro, waa kan ugu sarreeya oo weligiis ah. Wuxuu abuuray wax kasta oo samada iyo dhulka jira oo nolosheenna isagaa ina siiyay. Sidaas daraaddeed, isaga keligiis baa xaq u leh inaan caabudno.
Sharciga loo dhiibay nebi Muuse wuxuu ahaa “hadalkii malaaʼiguhu ku hadleen”
Ilaahay waxyaalo badan baa loogu yeeraa laakiin wuxuu leeyahay magac keliya oo ah YEHOWAH. Ilaahay wuxuu Muuse ku yiri: “Waxaad ku tidhaahdaa reer binu Israaʼiil, Rabbiga [Yehowah] ah Ilaahii awowayaashiin, oo ah Ilaahii Ibraahim, iyo Ilaahii Isxaaq, iyo Ilaahii Yacquub ayaa ii soo kiin diray; kanu waa magacayga weligay, oo laygu xusuusto ka ab ka ab.” (Baxniintii 3:15, NW) Magaca Yehowah 7,000 oo jeer in ka badan buu ku qoran yahay Qorniinka Quduuska ah. * Waxaa qoran, “adigoo magacaagu Ilaah [Yehowah] yahay aad tahay Ilaaha ugu sarreeya dunida oo dhan.”—Sabuurradii 83:18, NW.
Qoraal taariikh hore oo magaca Ilaahay ku qoran yahay oo laga helay Badda Dhimatay agteeda
Binuʼaadan Ilaahay arkay ma jiro. Ilaahay baa Muuse ku yiri: “Adigu wejigayga arki kari maysid, waayo, dad i arkaa noolaan maayo.” (Baxniintii 33:20) Ilaahay wuxuu jiraa samada oo binuʼaadanku ma arki karaan. Waa qalad inaan sameyno oo aan caabudno sanam ama sawir ama calaamad Ilaah matalaysa. Ilaahay Yehowah baa siiyay nebi Muuse amarkan: “Waa inaanad samaysan sanam xardhan, ama wax u eg waxa samada sare jira, ama waxa dhulka hoose jira, ama waxa biyaha dhulka ka hooseeya ku jira. Waa inaanad iyaga u sujuudin, ama u adeegin, waayo, aniga oo ah Rabbiga Ilaahaaga ah waxaan ahay Ilaah masayr ah.” (Baxniintii 20:2-5) Kaddib Ilaahay baa farriin u dhiibay nebi Ishacyaah oo wuxuu ku yiri: “Anigu waxaan ahay Rabbiga . . . oo sharaftaydana mid kale ma siin doono, oo ammaantaydana sanamyo xardhan innaba ma siin doono.”—Ishacyaah 42:8.
Dad baa aamminsan Ilaahay laakiin waxay u arkaan mid la garan karin oo loo dhowaan karin, mid laga baqo intii la jeclaan lahaa. Adigu maxaad u maleysaa? Ilaahay adiga laftaada muu ku daneeyaa? Ma run baa inaad Ilaahay baran kartid oo ad u dhowaan kartid? Bal aynu aragno waxa Qorniinka Quduuska ah ay ka sheegeen Ilaahay.
^ qayb. 4 Kitaabka Quduuska ah oo af Soomaali lugu turjumay magaca Yehowah wuxuu ku qoran yahay Bilowgii 22:14 iyo Baxniintii 17:15.
Maxay waajib u tahay inaan Ilaahay caabudno?
Magaca Ilaahay waa maxay?
Maxay u tahay qalad inaan sanamyo ama calaamado isticmaalno markaan caabudayno Ilaahay?
Sidee buu Ilaahay u isticmaalaa ruuxiisa quduuska ah iyo malaaʼigtiisa siduu u dhammaystiro doonistiisa?
Ilaahay ruuxiisa quduuska ah iyo malaaʼigtiisa
Sidee buu Ilaahay wuxuu rabo u sameeyaa? Hab uu isticmaalo waa soo diridda ruuxiisa quduuska ah. Ilaahay ruuxiisu qof ma aha malaaʼigna ma aha laakiin waa quwaddiisa aan la arki karin uu wax ku qabto. Ilaahay ruuxiisa waa awood xad lahayn oo uu ku qabto wax alla iyo wuxuu rabo. Awooddan buu isticmaalay markuu samada iyo dhulka abuuray. “Samooyinka waxaa lagu sameeyey Rabbiga eraygiisa, oo guutooyinkooda oo dhanna waxaa lagu uumay neefta afkiisa [oo ah ruuxiisa quduuska ah].” (Sabuurradii 33:6) Buugga Bilowgii 1:2 wuxuu inoo sheegayaa waagii oo biyo keliya dhulka yaalleen oo uu Ilaahay adduunka u diyaarinayay binuʼaadanka, waagaas “Ruuxa Ilaahna wuxuu ka dul dhaqdhaqaaqayay biyaha.” Kaddib Ilaahay wuxuu isticmaalay ruuxiisa quduuska ah siduu u abuuro wax kasta oo dunida ku nool.
Ilaahay wuxuuna diraa malaaʼigtiisa sida ay u falaan doonistiisa. Ilaahay malaaʼigta wuxuu u abuuray siday samada ugu noolaadaan. Iyagu aad bay u xoog weyn yihiin. Malaaʼigtu waxay soo gudbiyaan farriimo xagga Ilaahay ka yimid oo waxayna qabtaan hawlo kale oo muhim ah. Matalan Qoraalka Quduuska ah waxay sheegeen Sharcigii nebi Muuse naloogu soo dhiibay inuu ahaa “hadalkii malaaʼiguhu ku hadleen.” Welibana Ilaahay malaaʼigtiisu waxay caawiyaan addoommadiisa dhulka jooga. Sidaas buu Qoraalka Quduuska ah Ilaahay malaaʼigtiisa ugu yeeray “ruuxyo kaalmeeya oo loo soo diray inay shuqul u qabtaan kuwa badbaadada dhaxli doona.”—Cibraaniyada 1:14; 2:2.
Wadaag Wadaag Ilaahay Yuu Yahay?
Ilaahay Magac Muu Leeyahay?